Dubartoota Sidaamaa: 'Gaaffiin keenya sababa gahaa malee harkifataa jira' - BBC News Afaan Oromoo
Dubartootni Sidaamaa aanaalee godinichaa garaagaraa irraa walitti dhufan gaafii naannoo ta'uu uummata Sidaamaa ilaalchisuun har'a magaala Hawaasaatti hiriira bahaniiru.
Hiriirri kun sirna aadaa dubartootni Sidaamaa aarii yookin muufii qaban ibsachuuf bahan ta'uusaa fi haadholii maqaa 'arichoo' jedhamaniin durfamaa akka jiru dhageenye.
"Sidaamaan har'a osoo hin taanee waggoota 27 duras gaafii naannoo ta'uu gaafachaa ture" kan jedhan adde Birrinash Abirahaam "guyyaan rifarandamii hatattamaan murtaa'ee nutti himamuu qaba" jedhan.
"Sabni Sidaamaa waggoota 130 dura bilisummaa kan qabu fi ofin of bulchaa kan ture ta'ullee mootummoota sirna 'tokkummaa' tarkaanfachiisaniin garuu mirgi ofin of bulchuu isaa mulqamee bilisummaa isaa dhabee ture" kan jettu shamarree Daansittaa Asaffaa waggoota 27 darbanis maqaa naannoo Kibbaa jedhuun bifa sirrii hin taaneen moggaafamnee jirra jechuun BBCti himte.
Gaafin naannoo ta'uu uummata Sidaamaa mana maree godinaatin ragga'ee gama mana maree naannootin boordii filannootif dhiyaachuusaa kan himtu shamarree Daansittaa Asaffaa "boordiin filannoo gaafii keenya sababa amansiisaa malee karaa sirrii hin taaneen lafarra harkisaa jira" jechuun himti.
Kanaafis dubartootni Sidaamaa har'a hiriira bahan dhaadannoowwan "guyyaan rifarandamii nutti yaa himamu, mirgi ofin of bulchuu uummata Sidaamaa yaa kabajamu akkasumas murteen uummataa /rifarandamiin/ nuf yaa adeemsifamu" jedhan dhageesisaa akka jiran dubbatti.
"Kibbi nuyi bakka hin bu'u. Kibbi maqaa kallattiiti. Nuti Sidaamaa dha" kan jedhan adde Birrinash Abirahaam gaafin isaanii gaafii haaraa akka hin taane fi olaantummaa seeraa akka kabajamu fi mirgi isaanii akka kabajamu gaafatan.
Uummatni Sidaamaa waggoota darbanitti gaafii naannoo ta'uu gaafachaa kan mture yemmuu ta'u walitti qabduun boordii filannoo Itoophiyaa Birtukaan Miidhagsaa gaafiin rifarandamii kun gama mana maree naannichaan akka dhiyaatef fi boordiin filannoo garuu hojiilee rifoormii fi fooyya'iinsaaf dursa kennee hojjechaa akka jiru himuun isaanii ni yaadatama.
Fiichee Cambalaalaa: bara haaraa saba Sidaamaa 2011
Irreechi 2018: Irreechi Hora Arsadiitti haala ho'aan kabajamaa oole nagaafi milkiin xumurameera
Erga buufati boba'aa Sa'uudii haleelamee gatiin boba'aa dabale